Hlobo Luni lwe-TV Engingayisebenzisa Ne-EMD? - Easy Multi Khombisa
Uhlobo luni lwe-TV engingalusebenzisa nge-EMD?
Idalwe Qalile 04 / 11 / 2019
Ukuba nezikrini ezifanele kubalulekile ekusebenzeni kwesibonisi sakho ngakho-ke umbuzo hlobo luni lwe-TV engingalusebenzisa ne-EMD?
Sihlanganise amakhanda ethu futhi size neminye imibuzo okufanele sizibuze yona ngaphambi kokukhetha izikrini zakho zokubonisa.
1. Yini isabelomali sakho?
Uma wenza izinqumo ngokusekelwe kumanani entengo, khona-ke ukwazi ibhajethi yakho kubalulekile ngaphambi kokuqala ukuze wazi ongakwazi ukukukhokhela futhi ungachithi isikhathi ubheka izinketho ezingekho kulayini bakho.
2. Iyini inhloso yemibukiso yakho?
Abantu basebenzisa imibukiso ngenxa yezizathu eziningi ezahlukahlukene, abanye abanikazi bamabhizinisi amancane babonisa imenyu yabo esikrinini esincane ngaphakathi endaweni yokudlela yabo, ngakho-ke i-TV ejwayelekile ye-brand generic ingabafanela nje, kanti amanye amakhasimende amakhulu asebenzisa lezi zikrini njengendawo yokukhangisa ephezulu efasiteleni lawo lesitolo futhi ngaleyo ndlela bafuna izikrini zokubukeka eziqeqeshiwe ngemigqa yekrisimisi nemichilo emincane. Uzoba kanjani usebenzisa imibukiso yakho?
3. Sisetshenziswa kangaki isikrini?
Ngabe uzobe usebenzisa isibonisi sakho esingu-24/7, noma amahora ambalwa ngosuku? Lapho ukhetha isikrini sakho, qiniseka ukuthi ubuza umsizi wakho wezitolo mayelana nokuphila kwesikrini. Ngokwesiko izikrini ze-LCD zinesikhathi eside sokuphila kunezibonakaliso ze-plasma, noma kunjalo hlola umthengisi wakho wesibonisi ukuthola intuthuko yakamuva yezobuchwepheshe.
4. Kuzoba yini ukwakheka ngokomzimba kwemibukiso yakho?
Ngabe ufuna ifomethi yemvelo yendabuko, noma ukhetha ukukhetha ukubonwa kwesikrini sakho?
Ngabe ulwabele indawo engakanani udonga noma phansi?
Lokhu kuzokwazisa ngosayizi omkhulu wesikrini ongawacubungula. Uma uhlela ukubeka ukubonisa okuningi ndawonye, ​​cabanga ngosayizi we-bezel wesikrini.
5. Hlobo luni lokulungiswa ozodinga?
Ngabe udinga icala lokubonisa, noma iyunithi yokuzijabulisa? Mhlawumbe udinga izindunduma zodonga, noma umshini wokudlala umshini nesikrini se-projektha?
6. Ufuna hlobo luni lombukiso?
Kunezindlela eziningi ezahlukahlukene emhlabeni wezindlela zokubonisa.
I-TV yakudala, ecishe ibe ngu-250 cd / m²
Isikrini sokubonisa esinamandla sisuka ku-300 cd / m² siye ku-4000 cd / m² ngokuthola okungcono ukwelashwa okukhombisa ukubonakalisa.
Izimpendulo zakho zemibuzo engenhla izokusiza uthathe isinqumo sokukhetha kokugcina kwesibonisi sakho.
Izinhlobo ezaziwa kakhulu emkhakheni wezimpawu zedijithali yi-LG, Samsung ne-NEC.
Izikrini zabo ezikhethekile ziqinisekisa inani eliphansi lokwehluleka.
Ungasebenzisa noma yiziphi izikrini ze-TV ejwayelekile ezindlini ngokukhanyiswa okuncane, kepha wazi ukuthi kungenzeka zingavezi ukusebenza okufanayo noma ukwethenjwa njengokubonisa kobuchwepheshe bedijithali yedijithali.
Uma ungaqiniseki ukuthi uluphi uhlobo lwesikrini oludingayo, bese uthinta
futhi asikuqondise ngobuningi bezimo ezingenzeka.
Uma unesithakazelo ku-software yethu ye-Easy Multi Display, chofoza lapha ukulanda inguqulo yethu yesilingo.
Ukuhlanganisa i-Digital Signage Puzzle
I-Digital Out-of-Home: I-Re-Emerging Medium ye-Franchise Brands
Izibonelo ezi-5 Zokuthi Izimpawu Zedijithali Zingawasekela Kanjani Amabhizinisi Amancane Ngemuva Kokuvulwa Kwamanje